यात्रा चिकित्सा बीमा आवश्यकता | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > यात्रा चिकित्सा बीमा आवश्यकता
एक रोमाञ्चक भाग यात्रा विदेश अनुभव को unpredictability छ. जब तपाईं विदेशी भूमिमा यात्रा, तपाईं उजागर हुनेछ विभिन्न संस्कृति, सेटिङहरू, र अनुभव. पनि यदि तपाईं केही गर्न अनुसन्धान, तपाईं के पाउन केही आश्चर्य लगियो गर्न निश्चित हो. दुर्भाग्यवश, छैन आश्चर्य को सबै तपाईं सामना राम्रो व्यक्तिहरूलाई हुन सक्छ, र बस किनभने तपाईं छुटिमा, बिदामा तपाईं हानि प्रतिरक्षा मतलब छैन.
तपाईंले यी misfortunes तपाईं के गर्न सक्छ भनेर विश्वास गर्न चाहँदैनन् सक्छ, तर तपाईं संभावना लागि तयार गर्न आवश्यक तपाईं, वा एक प्रेम, जबकि घर देखि टाढा चिकित्सा ध्यान आवश्यक हुनेछ. यसलाई आफ्नो दाँत छिल रूपमा सरल छ कि छैन भनेर, तपाईंको टखने spraining, ज्वरोको साथ तल आउँदै, वा हृदयघात, तपाईं आवश्यक रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका मा हुनेछ रूपमा सजिलो नहुन सक्छ चिकित्सा उपचार प्राप्त.
किनभने सबैभन्दा परम्परागत स्वास्थ्य बीमा योजना अमेरिकी माटो मा जे परे कवरेज विस्तार नगर्नुहोस्. यो तपाईं हेरविचार लागि लागत चिकित्सा डलर हजारौं लागि विदेशी प्राप्त हुक मा हुन सक्छ अर्थ. कुनै यात्री किन यात्रा चिकित्सा बीमा बिना हुनुपर्छ यो छ. यी विशेष योजना जानेछ आफ्नो घरेलू कवरेज जहाँ गर्दैनन्, तपाईं सक्षम हुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्न चिन्ता बिना आफ्नो यात्रा रमाइलो यस अप्रत्याशित भइरहेको बारे.
अधिकको लागि यात्रा को बारे मा जानकारी मेडिकल बीमा र किन तपाईले यसलाई लिने बारे सोच्नु पर्छ, तल निहित पुस्तिका हेर्न.
किन यात्रा चिकित्सा बीमा एक राम्रो विचार छ?
• एक यात्रा विदेशी मुलुक धेरै स्वास्थ्य खतरहरुको परिचय गर्न सक्नुहुन्छ. उदाहरणका लागि, पानी गुणस्तर नै नहुन सक्छ, गम्भीर संक्रमण प्रमुख. विभिन्न जलवायु आफ्नो पूर्व-विद्यमान अवस्था फाटो सक्छ, यस्तो हृदय रोग वा एलर्जी रूपमा, छोडेर तपाईं स्थिति सम्हाल्न बिरामी-सुसज्जित.
• तपाईंले पहिले नै स्वास्थ्य बीमा छ तापनि, यो संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिर तपाईं कवर सक्छ. यो कुनै पनि रोगहरूबाट वा विदेश यात्रा अत्यन्तै उच्च चिकित्सा बिल सक्छ गर्दा अनुभव घाइते अर्थ.
• तपाईंले संसारको टाढाको भाग भ्रमण र तत्काल चिकित्सा ध्यान आवश्यक छ भने, तपाईं एक अस्पताल खाली गर्न आवश्यक पर्दछ. उचित बीमा कवरेज बिना, यो कुनै पनि अन्य सम्बन्धित खर्च को शीर्ष मा डलर को दसौं हजार खर्च गर्न सक्छन्.
• केही परिस्थितिहरूमा, तपाईं आफ्नो यात्रा को अवधिको लागि यात्रा स्वास्थ्य बीमा गर्न आवश्यक हुन सक्छ. उदाहरणका लागि, रूस आगन्तुकहरूलाई, क्युबा, र ईयू को सेन्जेन क्षेत्र राष्ट्रका तिनीहरूले कवरेज छ साबित हुनुपर्छ.
• तापनि यात्रा स्वास्थ्य कवरेज अत्यन्तै मूल्यवान हुन सक्छ, यो सामान्यतया भन्दा कम लागि खाताहरू 10 द्वारा खरिद सबै यात्रा बीमा उत्पादनहरु को प्रतिशत यात्री, अपेक्षाकृत सस्तो हुनुको गर्दा.
कसरी यात्रा चिकित्सा बीमा तपाईं सुरक्षा
• यात्रा चिकित्सा बीमा मानक यात्रा बीमा नीति भिन्न मुख्यतया कि यो रद्द गर्न सम्बन्धित लागत लागि कवरेज प्रदान गर्दैन, ढिलाइ, वा अवरोधहरू.
• यात्रा चिकित्सा बीमा संग, तपाईं एक अप्रत्याशित स्वास्थ्य आपतकालीन को घटना मा कवरेज हुन सक्छ. यी जीवन खतरामा चोट लागेको र हृदय आक्रमण खाना विषाक्तता को एक भाँचिएको दाँत वा पल्ट देखि दायरामा गर्न सक्नुहुन्छ.
• यी नीतिहरूको प्राथमिक लाभ को एक तिनीहरूले प्रदान गर्ने छ 24/7 तपाईं विदेश मा स्वास्थ्य हेरविचार कर्मचारी संग समन्वय गर्न मद्दत गर्न बहुभाषी समर्थन.
• के साधारण प्रमुख चिकित्सा मानिन्छ यी नीतिहरू सामान्यतया लागि कवरेज प्रदान खर्च. यी आकस्मिक कक्ष भ्रमणमा समावेश, निकासी सेवाहरू, र यातायात लागत एक उपयुक्त चिकित्सा सुविधा पुग्न व्यय.
• सबै भन्दा साधारण योजना एकल यात्रा कवर, तर तिनीहरूले पनि लामो रूपमा अवधि ढाक्न खरिद गर्न सकिन्छ 12 महिना. विस्तारित अवधि पनि मासिक वेतन वृद्धि मा किनेको गर्न सकिन्छ वा बारम्बार यात्रा गर्नेहरूका लागि दीर्घकालीन चिकित्सा कवरेज.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “युरोप मा सबै भन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-need-for-travel-medical-insurance%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
यहाँ पीडीएफ डाउनलोड द्वारा एक ट्रेन बचत गर्न प्रदान गरिएको थियो जसमा यो लेख को लागि इलिनोइस को वरिष्ठ सेवा